३० जनाको हxत्या गरेर मासु नै खाएको यो जोडीको कोठाबाट आठ शxव फेला, मा,नव मासुलाई फ्रिजमा राखेर खाने गरेको खुलासा – Dainik Sangalo
३० जनाको हxत्या गरेर मासु नै खाएको यो जोडीको कोठाबाट आठ शxव फेला, मा,नव मासुलाई फ्रिजमा राखेर खाने गरेको खुलासा
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन २५, २०७८ समय: ११:४६:४२
३० जनाको हxत्या गरेर मासु नै खाएको यो जोडीको कोठाबाट आठ शxव फे,ला, मानव मासुलाई फ्रिजमा राखेर खाने गरेको खुलासा
एजेन्सी । के मानिसले मानिसको मासु खान सक्छ ? के यो कुरा सम्भव छ ? रुसको क्रासनोदर सिटीमा पुलिसले एक ‘नरभक्षी’ जोडीलाई ३० जनाको हत्या गरेर मासु पकाएर खाएको आ,रो,प,मा प,क्रा,उ गरेको छ । रुसको क्रासनोदर सिटिमा बस्ने ३५ वर्षका दिमित्री बोकेशेव र उनकी नर्स श्रीमती नतालियालाई प,क्रा,उ गरेको छ ।
यो जोडीले विगत १८ वर्षदेखि ३० जनाको हत्या गरेर उनीह,रुको मासु खाएको स्विकारेका छन् । पुलिसले यो जोडीको घरबाट आठ शxवको अंग पनि बरामद गरेको छ । अनुसन्धानमा खटीएको प्रहरीका अनुसार यो जोडीले मानव मासुलाई थुप्रै दिनसम्म फ्रिजरमा राख्ने गरेको र उक्त मासुको अचार पनि बनाउने गरेको खुलासा भएको छ ।
उनीहरुले घरमा नै एउटा भण्डार बनाएका थिए जहाँ उनीहरु आफ्ना शिकारीको श,रि,रको टुxक्रा राख्थे र उनीहरुसँग सेल्फी पनि खिच्थे । उक्त भण्डारबाट १९ वटा छाxला पनि बरामद गरिएको छ । उनीहरुले हत्याx गरिएका ब्यक्तिको शxवबाट छाला निकाल्ने गरेको रहस्य समेत खुलेको छ ।
असोज २५ गते शनिबार राती ९ बजे अनिताको अमेरिकाको फ्लाइट थियो । उनका श्रीमान अमेरिकामै बस्दै आएका थिए । त्यसै अनुरुप उनी पनि श्रीमानसगैँ बस्न अमेरिका जान लागेकी थिइन । तर २० गते दिउँसो करिब २ बजे तिर उनी आफ्नै कोठामा पं’खामा झु’न्डि’एको अवस्थामा मृत फे’ला परिन । मृ’त्यु पछि उनका कोठामा नो’ट भेटिएको छ । सबै आफ्ना कुराहरुको नो’ट बनाएर लेख्ने बानी गरेकि अनिताले आफ्नो घरमा आफू माथी हुने गरेको ब्याबहारको बारेमा पनि नोटमा लेखिकी छिन ।
रुपन्देही जिल्लाको बुटवल स्थित देबिनगरकी अनिता रेग्मी करिव तीन वर्ष अघि बुटवल नजिकै ढवाह बस्ने सुमन खनालसगँ बिबाह भएको थियो । परिवारबाटै उनिहरुको मागी बिबाह भएको थियो । बिहे भएको एक महिना मै अनिताका श्रीमान सुमन अमेरिका गएका थिए । त्यस पछि एक पटक नेपाल आएका सुमनले अनितालाई पनि अमेरिका लैजाने प्रक्रिया थालेका थिए । अमेरिकामा नेपाली गरगहनाको निकै महत्त्व भएकोले अनिताले आफ्ना गरगहना लिएर जाने तयारी गरेकी थिइन । तर उनकि सासुलाई त्यो कुरा मन परेन । सोही कारण उनलाई विभिन्न मानसिक त’नाव दिएकोले यो घ’टना भएको उक्त नोटबाट बुझ्न सकिने अनिताका माइती पक्षको भनाई छ ।
अनिताद्वारा लेखिएको त्यो नोटले यो घटनालाई झन र’ह’स्यमय बनाएको छ । यो सब हुनुमा अनिताको घरकै परिवारजनको हात हुनसक्ने कुरामा शं’का गर्ने ठाउ भने प्रशस्त रहेको छ । अनिताका माइतीपक्षले यो ह’त्यामा घरभित्रकै मान्छेको हात रहेको र षड्यन्त्रपुर्बक मारिएको कुरा पनि बताएका छ्न तर अनिताका घरका भने यो मान्न तयार छैनन ।
अनिताको नोटअनुसार उनको देवरसग खासै राम्रो सम्बन्ध नरहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ तर देवर भने भाउजुसग राम्रै सम्बन्ध भएको बताउछन जबकी अनिताले भने देवरले राम्रो व्यबहार नगरेको कुरा आफ्नो नोटमा स्पष्ट लेखेकी छिन । देवरले जहिले डेढे आखाले हेर्ने गरेको कुरा उनले स्पष्ट आफ्नो नोटमा लेखेका छन र दाजुले यसमा सहि थपेकोमा देवर भने भाउजुलाइ जहिलेपनि एउटिआमाको नजरले हेरेको कुरा बताउछन ।
Last Updated on: October 11th, 2021 at 11:46 am